ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းရေးသားတဲ့ “သံတမန်ကျရှုံးမှုမှသည် စစ်အုပ်စုအလုံးစုံကျဆုံးမှုဆီသို့” ဆောင်းပါးကို နွေဦးကိုကိုက ဖတ်ရှုပေးထားတာ နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 13K Share – 1256
2021-07-11 at 8:14 PM
အလင်းပြပေးနေတဲ့ ကြယ်လေးတွေကို ချစ်တယ်
တိမ်မည်းတွေ ဖုံးလွမ်းခြင်း ခံထားရတဲ့
တောက်ပနေပေးတဲ့ ကြယ်လေးကို ပိုချစ်တယ်
ကြယ်လေးတွေကို ချစ်သည့် ကျွန်တော်
#Demo AM 3:00
Wai Zin Ag says:
2021-07-11 at 8:16 PM
the speaker’s voice is big similar to Kyaw Htet Aung voice.🙂
Khin Lay Myaing says:
2021-07-11 at 8:42 PM
မြန်မာပြည်သူ အများစုကမလိုလား နိုင်ငံအပေါ်
ကောင်းကျိုးမပြုသော စကစ အုပ်ချုပ်ရေး အမြန်ကျဆုံးပါစေ
2021-07-11 at 11:00 PM
Zaw Win Simon says:
2021-07-11 at 11:25 PM
တစ်ခု အရမ်းကောင်းတာရှိတယ်။ တချိန်က အမေစု အင်တာဗျုူးတဲ့အခါ နိုင်ငံရေးဘယ်လောက်တောင် အောင်မြင်မူရှိသလည်းလို့ မေးတော့ အမေစု က ကျမ မရှိတဲ့ အချိန် သူတို့တွေ ဘယ်လောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သလည်း ဆိုတာ အဖြေပဲလို့ပြောတယ်။ နောက်ပြီး အမေစု က ပြောတယ်..ကျမ အလုပ်လုပ်နေတာ နောင် အနှစ် ၂၀ စာ အတွက် ကြိုလုပ်နေတာ လို့ပြောတယ်။ အခုတော့ နားလည်သွားပြီ။ လူငယ် လူရွယ် အတွေ့အကြုံ ကောင်းပြီ အင်မတန် ထက်မြက် ပြီ တော်သော် ပညာရှင်တွေ အများကြီး Nld မှာ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် Nld ဟာ ဘယ်အချိန် ပဲဖြစိဖြစ် တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင် နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့မြင်လိုက်ရတာကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ မျော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရသွားပြီ။
2021-07-12 at 8:21 AM
အမေစု ကိုသတိရ တယ် အမေကျန်းမာပါစေ
2021-07-12 at 10:12 AM
အ ရမ်း စိတ် ဆင်း ရဲ နေ ရ ပါ
တယ်။ သူ့ မျက် နှာ ကို တ မိ နစ်
တ စက် ကန့် တောင် ကြည့် လို့ မ
ရ ပါ။ မီး လို ပူ ပါ တယ်။ G-Z.
လေး တွေ သေ တိုင်း ကျ မ အ
လွန် စိတ် ထိ ခိုက် ရ ပါ တယ်။
ကျ မ က နှ လုံး ရော ဂါ သည် ပါ
ခ လေး တွေ က ပ ညာ တတ် တွေ
သူ တို့ မှာ အ နာ ဂါတ် ပန်း တိုင် ရှိ
ခဲ့ တာ ကို ရိုက် ချိုး ခံ လိုက် ရ
တာ သူ တို့ လေး တွေ ရဲ့ အ မေ
နေ ရာ က နေ ဝင် ပြီး ကိုယ် ချင်း
စာ ပြီး ခံ စား ကြည့် တာ ရင် ကျိုး
ပြီး နာ ကျည်း ရ ပါ တယ်။ ကျ မ
မှာ လွတ် လပ် ရေး ဘယ် တော့ ရ
မ လဲ ဆို တာ ကို မျှော် မျှော် နေ ရ
လို့ အ လွန် ဘဲ စိတ် ပင် ပန်း ပါ
တယ်။ နာ ကျည်း ရ ပါ တယ်။
Thanksalot ! Retired Nurse. U S.
May Htwe says:
2021-07-12 at 12:38 PM
အရေးတော်ပုံကြီး အောင်ကိုအောင်ရမည်။ စိတ်ရှည်သီးခံဇွဲအားမာန်ဖြင့် အေးချမ်းသာယာဝပြောသော ၊ခေတ်မှီတိုးတက်ကောင်းမွန်သော.မြန်မာပြည်သစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းကြမည်
ယုံ ကြည် ရာ says:
2021-07-12 at 2:18 PM
R2P မျှော်ပါတယ်။ EAOs နဲ့ GZ ဆုံးရှုံးမှုကို မခံစားနိုင်လို့ပါ။
2021-07-12 at 5:31 PM
2021-07-12 at 6:15 PM
စစ်အာဏာရှင်တွေ အမြန်ဆုံးကျရှုံပါစေ။ NUGသာပြည်သူ့အစိုးရပါ။
2021-07-12 at 7:17 PM
2021-07-12 at 7:41 PM
ရုရှားနိုင်ငံမှလွဲ ကျန်အခြားမိတ်ဖက်ဟုဆို​သောနိုင်ငံတို့က ဖက်ဆစ်အကြမ်းဖက်လူမိုက်ကောင်စီ
အပေါ် ဆက်ဆံရေးသဘောထားတို့မှာ NUGအစိုးရအပေါ် ဂျီဆဲဗင်းအပါအဝင် ကျန်မိတ်ဖက်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးသဘောထားနှင့် ဥပမာထား၍ ပြနိုင်မည်ဟု ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါသည်၊
ညီမျှလုနီးပါးရှိသည်ဟု ယူဆပြီး ချေဖျက်လိုက်လျှင် ထီးတည်းကြွင်းကျန်နေသော နိုင်ငံသည် တနိုင်ငံတည်းသာဖြစ်သောလည်း game changerအဖြစ် ပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ခဲ့လျှင် စစ်မှန်သော မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်၏ အကူအညီကို အပြည့်အဝရခဲ့ပါလျှင် အမှုကိစ္စအလုံးစုံကို ပြီးစီးစေသည်ဟူသော တရားတော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ကိုက်ညီနေကြောင်းကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်သိရှိထားခြင်းကြောင့် ရေများပြီး ငါးမရသည့်အဖြစ်မျိုးမှ ဇာတ်အီသွားခြင်းကို ဂရုစိုက်နိုင်ပါမှ ဇာတ်မျောမည့်ဘေးကို တားဆီးနိုင်ကြပါမည်၊
2021-07-14 at 10:32 AM
Hlamyo Naing says:
U San Maung says:
Zaw Khaing Tun says:
ယီမင်လို ဆီးရီးယားလိုမဖြစ်ချင်ဘူး ဆရာတို့ အားလုံးပါအောင်စည်းရုံးပြီတိုက်မယ်
မေဦး မေဦး says:
2021-07-22 at 8:02 PM
မြန်မာပြည်ကလက်မခံသူကို ကုလက သံတမန်ခန့်လိုက်ရင် အရူးကုလ ဖြစ်သွားမှာပေါ့
2021-07-25 at 10:32 AM